Fireside: Yakareruka Podcast Webhusaiti, Kubata, uye Analytics | Martech Zone
Tiri kuvhura podcast yedunhu yakanyorwa mune yedu Indianapolis Podcast Studio asi isu hatina kuda kupfuura nedambudziko rekuvaka saiti, kuwana podcast inomiririra, uye nekuzadzisa podcast feed metric.
Imwe sarudzo ingadai iri yekugamuchira SoundCloud, asi isu tiri kuzeza kubva zvavakasvika padyo nekuvhara - hapana mubvunzo kuti vachatofanira kuchinjisa yavo yemari yemhando uye ini handina chokwadi kuti zvinorevei kune wese munhu anotambira podcast ipapo.
Mushure mekutsvaga kushoma pamhepo, takawana Fireside, mhinduro yakazara ye podcasting. Mitengo ingori $ 19 pamwedzi uye inosanganisira zvinotevera zvinhu.
Dhawunirodha Stats uye Analytics - chaiyo, chaiyo-nguva yekuodha stats uye analytics. Ma stats injini uye analytics kuzivisa kuri pakati chaipo pechigadzirwa, kuve nechokwadi chega chega kurodha pasi kunoteedzerwa uye kuverengwa nenzira kwayo.
Yakachena Mushandisi Chiitiko - iyo Fireside dashboard yakagadzirirwa kukurumidza, nyore kushandisa, uye yakagadzirirwa podcasting workflow. Izvi zvinokutendera iwe kuti utaridze simba rako kwarinoverengera - mukugadzira zvinoshamisira zvemukati panzvimbo pemabasa anonetesa sekuwedzera metadata, nemaoko kutonga kurodha pasi, kana kunetseka nezve zvinongedzo mumanotsi ekuratidza.
Yakagadziriswa Kufambiswa Kwebasa - chengetedza ese maficha ezve podcast yako, kusanganisira yekuvhara hunyanzvi, metadata, chitsauko mamaki, kuoneka, uye zvimwe. Ronga zvako manotsi ekuratidzira uye zvinongedzo nekukweva uye kudonha, uye gadzira mapeji etsika uye redirects. Iwe unogona zvakare kugovana nhamba dzako nevatsigiri vako uchishandisa yakazvimirira yega stats peji rakagadzirwa chaizvo nekuda kwechinangwa ichi.
Podcast RSS - gadzira yakakwana, iTunes-inoenderana RSS feed kuti ive nyore kuendesa kune Apple Podcasts (uye chero kupi). Iwe unogona kunyange kuseta zvikamu zvekuburitsa mune ramangwana otomatiki, kunyangwe iwe uri kure nekombuta yako nemidziyo.
Tumira Podcast - kubva kumugadziri wako aripo kupinda muFireside mune imwe nhanho, uye pasina imwezve mari. Mazita ekuremekedza, tsananguro, manotsi, uyezve iwo maMP3 mafaira anozounzwa sezvikamu zvitsva muFireside Podcast yako otomatiki. Podcast yako yapfuura haizokanganisike kudzamara (uye kunze kwekunge) waendesa chako chekare chikafu kune yako nyowani Fireside Podcast RSS feed.
Custom Domain - Unogona kushandisa ako echinyakare madomeni neFireside futi, nekungopinda yako domain zita mudhibhodhi uye kugadzirisa ako DNS marongero. Ichi chimiro, chakabatanidzwa neyakajairwa zvinongedzo uye mapeji zvinoita kuti zvive nyore kutamisa yako podcast, blog, uye webhusaiti kune Fireside.
Webhusaiti neBlog - Fireside yakagadzirirwa kuva yakazara podcast yekugadzirisa mhinduro, uye izvo zvinosanganisira ficha-yakapfuma, inoteerera webhusaiti kuitira kuti vateereri vako vadzidze zvakawanda nezve show yako. Kune ega ega anotambira uye mapeji evashanyi ane yavo yavo RSS feeds, tag mapeji (zvakare neayo yavo RSS feeds), tsika tsika uye zvinongedzo, izere blogging injini, inogadziriswa mifananidzo uye misoro mifananidzo yewebhusaiti uye yega episode episode, uye zvimwe zvakawanda .
Mutambo Wemutambo wekusimbisa - Goverana zvikamu zvako pane chero peji rewebhu kana chishandiso chekuburitsa, kubva kuSquarespace kuenda kuWordPress, uchishandisa yedu inomiridzirwa mutambi.
Bookmarklet - Manage episode links uye ratidza manotsi neabo bookmarklet Wedzera bhukimaki kubhurawuza rako rekubhukimaki, uye chero nguva iwe yaunowana peji raungade kubatanidza mune ekuratidza manotsi, ingotinya bhukumaki. Iwe unogona kunyange kusimudzira zvinyorwa pawebhu peji, uye ichawedzerwa seyatsananguro yeimwe link.
Tags: pamotomoto podcastmoto webhusaitipodcast kubatapodcast webhusaitipodcasting
Iwo matanhatu Migwagwa yekuenda kuGlobal pamwe neako E-Commerce